wordpress မှာ flash game Blog လေး လုပ်ချင်လို့— MYSTERY ZILLION
wordpress မှာ flash game Blog လေး လုပ်ချင်လို ့
April 2009 edited May 2009 in Other
WP မှာ ဂိမ်း ဘလော ့လေး လုပ်ချင်လို ့..
y8 မှာလို thumbil ပုံလေး ကို ကလစ်မှ ဂိမ်း ကို ဆော ့စေချင်တယ် ဗျာ..
နောက်ပြီးတော့မန်ဘာ ၀င်တဲ ့သူမှ ဂိမ်း ကို ဆော ့လို ့ရမယ်..GUEST ကိုတော့permission
ကန် ့သတ်ချင်ပါတယ်.. ဒိုမိန်း ရော host ပါ ဖရီးနော်.. ကူညီ ကျပါဗျာ.. ကွန်နက်ရှင် ကောင်းတုံး
လေး ကလိချင်လို ့ပါ...:77:
Wp မှာ ဖိုရမ် ဘယ်လို ဆွဲရလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျာ
အာာ..နောက်ဘီ..လူဆိုး.. ဘယ်နဲ့wp နဲ့ဖိုရမ် ဆွဲ မှာလဲ..
အခြား package တွေ နဲ ့လုပ်လေ..ဖရီးတွေ ပေါမှ ပေါ
အကိုရေ domain name ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း co.cc မှာ လုပ်လိုက်လေ။ အဲ ့host ကျတော ့byethost မှာ register လုပ်လိုက် ok သွားမယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လုပ်တုန်းကတော ့www.mmwordpress.com ကကိုသင်္ကြန် ရေးထားတဲ ့ebook ဖတ်ပြီးလုပ်လိုက်တာပဲအဆင်ပြေမှာပါ ။ အဲ ့တစ်ခုတော ့ရှိတယ်ဗျ byethost မှာ register လုပ်ရတာတော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ် ။ ပြည်တွင်းကနေလုပ်လို ့မရဘူးဗျ။ IP တွေ တူနေလို ့တဲ ့။ ကိုသင်္ကြန်ကိုပဲ လုပ်ခိုင်းရတယ်လေ။ အကိုလဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ............ အဆင်ပြေပါစေဗျာ.................
ကျွန်တော်က WP မှာ ဘလော ့လုပ်ဘူးပါတယ် .. အခု ခက်နေတာ ၈ိမ်း ဆိုတော ့
ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းကို မသိဘူး...swf တွေ နဲ ့လေ.. နိုင်ငံခြား က ဂိမ်းဘလော ့တွေလို
<embed src="http://yourname.googlepages.com/ArrowShooting.swf" width="400" height="350" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
အဲဒီ ကုတ် တွေ ခံပြီး လုပ်တာပါ.. နူမူနာ ကတော့www.mylittlegame.iblogger.org ပါ
အကြံလေး ဘာလေး ပေးကျပါအုံး..
ကျွန်တော် သိသလောက် ဆွေးနွေးပေးမယ်နော်...
wp တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လက်၀င်ပါလိမ့်မယ်...
မရဘူးလားဆိုတော့ ရပါတယ်။ စီးပွားရေးအတွက်ပဲလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ၀ိုင်းပြီး စဉ်းစားပေးပါ့မယ်။
ဒါမှမဟုတ် အပျင်းပြေပဲဆိုရင် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ လုပ်မနေပါနဲ့....
စီးပွားရေးအတွက်ပဲလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ၀ိုင်းပြီး စဉ်းစားပေးပါ့မယ်။
ဟီးးး အစ်ကို ပြောမှ ဘဲ ရင်ထိ ကို ဒါရိုက်ကြီးဘဲ..ဟိ..
ကျွန်တော် က ဘော်လန်ဒီ ရာ ကောင်..ပျင်းရင် ဘလော ့တွေ လျှောက် လုပ်..
မရ ရင် ဒီလို မေး ဟိုလို မေးတဲ ့ကောင်.. အားမပေးတော ့လဲ လုပ်တော ့ပါဘူး
ဒါနဲ ့အစ်ကို ရေ.. အခု byethost မှာ wp ကို install လုပ်တာ အရင်လို
data base name တွေ ဘာတွေ မတောင်းတော ့ဘူး ချက်ချင်းကြီး ပြီး သွားတယ်
ပြီးတော့ဘလော ့မှာ ?????? ဘဲ ပေါ်တယ် ဗမာ လို မရဘူးး UTF 8 လဲ wp မှာ
ပြောင်းထားတယ်.. အဲတာ ဘယ်လို ဖစ်တာလဲ ခင်ဗျ..
့ကိုမင်းလွင်ရေ hosting မှာရော UTF 8 ကို ပြောင်းပြီးပြီလား တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ။
ပြောင်းတယ် ခင်ဗျ.. အဲဒါ ကို မရ တာ ပို ့စ် လဲ တင်လို ့မရဘူး..
တန်းပလိတ် လားဆိုပြီး တန်းပလိတ် လဲ ပြောင်းလဲ zawgyi one တွေ လဲ အကုန် လိုက်ထဲ ့တယ်
အရင် မဖြစ်ဘူး ဘူးဗျ
ဘာလို ့လဲ တော ့မသိဘူး..။။
အဲဒါဆိုရင် တော ့သိတော ့၀ူးဂျ အဟီး........
သိတဲ ့လူတွေ ဖြေပေးကြပါဦး ခင်ဗျ......
အဲဒါ database ဆောက်တုန်းက UTF-8 နဲ့ မဆောက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်... အဲ.. ကြည့်ရတာ cpanel ထဲကနေ သွင်းလိုက်တာနဲ့ တူတယ်... ဒါဆိုရင်တော့ အဲလိုဖြစ်မှာပဲ... အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ဘာသာကို upload တင်။ နောက်ပြီး database ဆောက်သွင်းလိုက်။ အဲဒီ ပြသနာ ငြိမ်းသွားမယ်။
zmtin က ချွန်ပေးနေတယ်...ကိုစေတန် ရေ.
UTF 8 conventer plug in သွင်းရင် ရတယ် တဲ ့ဗျ..
ဟုတ် မဟုတ် သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ
ရပါတယ်ဆို ယုံဘူးပေါ့... ဒါဆိုလဲနေတော့...:d:14: